Baby – Page6– Healthy Life Journal
သုံးလကျော်သားလေး ချောင်းဆိုး၊ နှာစေးဖြစ်ခြင်း
မေး. သားသားက အခု၃လကျော်ပဲ ရှိသေးပါတယ်။ သားသား ချောင်းဆိုး၊ နှာစေးဖြစ်နေလို့ပါ။ ပြောပြပေးပါရှင်။ Lovely Zin(FB) ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. ကလေးဆိုတာ ပူတယ်၊ အေးတယ်လို့ မပြောနိုင်ပါဘူး။ ကလေးကို ထုပ်ထားလွန်းအားကြီးလို့ ချွေးပြန်ပြီး...
မွေးရာပါ နှလုံးတစ်ဝက်ပဲပါတဲ့ ၂လသား ကလေးငယ် နှလုံးအစားထိုးကုသမှုအောင်မြင်
၊ ကိုထက် ၊ ချာလီကို ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလမှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး သူရဲ့နှလုံးတစ်ခြမ်းဟာ ကောင်းစွာမဖွံ့ဖြိုးတဲ့အတွက် အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် နှလုံးအခန်းနှစ်ခုကြားမှာလည်း အပေါက်တစ်ပေါက် ပါနေပါသေးတယ်။ ချာလီရဲ့အမေ ထရေစီရဲ့ ကိုယ်ဝန် ၅လ အချိန်ကတည်းက ကလေးဟာ နှလုံးကောင်းစွာမဖွံ့ဖြိုးတာကို စမ်းသပ်မှုတွေမှာ...
ကျန်းမာရေးကောင်းပြီး နေ့စေ့လစေ့မွေး ဖွားလာတဲ့ ကလေးတွေအတွက် နှိပ်နယ်ပေးတာက ကလေးငယ်အတွက်ရော မိဘအတွက်ပါ အပန်းပြေစေနိုင်ပါတယ်။ ကလေးကိုနှိပ်ပေးတာကြောင့် ငိုကြွေးတာကို လျော့ကျစေပြီး လေထကာ ဗိုက်အောင့်တာကို သက်သာစေပါတယ်။ ကလေးကို နှိပ်ပေးတာကြောင့် ကလေးဟာ အိပ်ရေးဝ၀အိပ်မောကျစေပါတယ်။ ကလေးငယ်ရဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကို အားကောင်းစေပါတယ်။ ကလေးကိုနှိပ်ပေးတဲ့အခါအခန်းနဲ့ သင့်လက်တွေက...
မွေးစမှ ၆လအောက် ကလေးများအား မိခင်နို့တိုက်ကျွေးနှုန်း မြင့်တက်လာသော်လည်း မီးဖွားပြီး တစ်နာရီအတွင်း မိခင်နို့တိုက်ကျွေးနှုန်း ကျဆင်းလာ
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) မွေးစမှ ၆လအောက် ကလေးများအား မိခင် နို့တိုက်ကျွေးနှုန်း မြင့်တက်လာသော်လည်း မီးဖွားပြီး တစ်နာရီအတွင်း မိခင်နို့တိုက်ကျွေးနှုန်း ကျဆင်းလာကြောင်း ၂၇-၈-၂၀၁၈ ရက်နေ့က မန္တလေးမြို့၊ ဟိုတယ်မန္တလေးတွင် ကျင်းပသည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မိခင်နို့စနစ်တကျ တိုက်ကျွေးခြင်း လုပ်ငန်းများ မြှင့်တင်ရေးအခမ်းအနားမှသိရသည်။...
ရုပ်ချောလွန်းသည့် သားကြောင့် သံသယဝင်ခဲ့ရာက ကလေးငယ်ဘဝက ဆေးရုံတွင် ကလေးချင်းမှားခဲ့ကြောင်း သိရှိ
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ ရုပ်ချောလွန်းတဲ့သားကြောင့် သံသယဝင်မိရာက ကလေးချင်းမှားခဲ့ကြောင်း တရုတ်ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ယောက်ဟာ ရှာဖွေသိရှိခဲ့ပါတယ်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက ရုပ်မချောတာကြောင့် ဇနီးဖြစ်သူကလည်း သံသယဝင်ခဲ့ကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ မျက်လုံးကြီးကြီး၊ နှာတံချွန်ချွန်နဲ့ကလေးဟာ သူတိုနဲ့ ရုပ်ရည်အသွင်အပြင်မတူညီခဲ့ပါဘူး။ DNA စမ်းသပ်ချက်အရ အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ်...